Vala izinhlelo zokusebenza ezivulekile ku-Android ukuze iselula yakho ihambe ngokushesha | Izindaba zamagajethi
Ukusebenza kwedivayisi ephethwe yinoma yiluphi uhlelo lokusebenza kuyinkqubo eyinkimbinkimbi lapho inani elikhulu lezinqubo zilawulwa ngokuhlanganyela. Ngokuzenzakalelayo, idivayisi yethu inakekela ukuvula nokuvala izinhlelo ngokuya ngezidingo zohlelo.
Lapho uhlelo lokusebenza luvulekile, isikhathi sokuphendula lapho usifaka futhi sincishisiwe kakhulu. Ngenxa yenani elikhulu lezinqubo ezilawulwa yinoma isiphi isistimu yokusebenza, alihlali lenza izinto kahle, futhi kwesinye isikhathi kufanele siphoqeleke ukuzivala ngokwenza. Eqinisweni, bangayeka bebodwa ngenxa yalokhu, njengoba sibonile ku-athikili: Uhlelo lokusebenza le-Google limile. Kule ndatshana sikukhombisa ukuvala kanjani izinhlelo zokusebenza ku-Android.
1 Yini ukusetshenziswa kwezicelo zokuvala ku-Android
2 Ungazivala kanjani zonke izinhlelo zokusebenza ezivulekile ku-Android
3 Ungaluvala kanjani uhlelo oluthile ku-Android
4 Ungazivimba kanjani izinhlelo zokusebenza ukuthi zisebenze ngemuva
Yini ukusetshenziswa kwezicelo zokuvala ku-Android
Njengoba ngishilo ngenhla, zonke izinhlelo ezisebenzayo, ikakhulukazi ezihambahambayo, unakekele ngokuzenzakalela ukuvula nokuvala izinhlelo ngokwendlela esizisebenzisa ngayo. Izinhlelo zokusebenza ezithatha inkumbulo enkulu kwikhompyutha yethu yimidlalo, ikakhulukazi leyo ethatha isikhala esiningi kwi-hard drive yethu.
Lapho siphuma emdlalweni, ugcinwa kwimemori, ngakho-ke uma sima ukudlala imizuzwana embalwa ukuphendula ucingo, siphendule i-imeyili noma i-WhatsApp singabuyela ngokushesha emdlalweni ngaphandle kokuthi ulinde ukuthi ilayishe futhi.
Uma inkumbulo yedivayisi yethu icinene kakhulu, kungenzeka ukuthi umdlalo okukhulunywa ngawo uvala kusukela lapho awunayo imemori eyanele yokugcina uhlelo lokusebenza luvulekile. Uma sihlela ukuba nesikhathi esimnandi sidlala ne-smartphone yethu futhi asifuni ucingo noma umyalezo ozosiphoqa ukuthi siwuvule futhi lo mdlalo, okungcono kakhulu esingakwenza ukuvala zonke izicelo esaziyo ukuthi ngeke sizisebenzise.
Vala zonke izinhlelo zokusebenza ezingemuva ezivulekile, kuzosivumela ukuthi sikhulule i-RAM, ukuthi asikho isikhala sokugcina (akumele sidideke) ukuze uhlelo lokusebenza lusebenze ngendlela enamanzi amaningi nokuthi futhi, ngaphambi kwanoma yikuphi ukuphazamiseka, uhlelo aluphoqelekile ukuluvala.
Kepha futhi, ukuvala izinhlelo zokusebenza noma imidlalo futhi kusivumela ukuthi sengeze uketshezi lwedivayisi yethu, Umsebenzi okufanele siwenze lapho i-smartphone noma ithebhulethi yethu ephethwe yi-Android isiqalile ukuxhuga nokuxokozela njalo lapho senza noma yisiphi isenzo, noma ngabe kulula kangakanani.
Yize kuliqiniso ukuthi indlela enhle yokukhulula inkumbulo yemishini yethu qalisa kabusha idivaysi, akuyona njalo indlela esheshayo, ngaphandle kokungabi ntofontofo kakhulu. Ngenhlanhla, i-Android isinikeza izindlela ezahlukahlukene zokuvala izinhlelo noma imidlalo esiyivulile.
Ungazivala kanjani zonke izinhlelo zokusebenza ezivulekile ku-Android
Ngenhla ngiphawule ukuthi i-Android natively isivumela ukuthi sivale izinhlelo esizivule kukhompyutha yethu ngaphandle kokuphendukela kuzicelo ezivela eceleni, elenza lula le nqubo ngaphandle kokuthi useshe ikhompyutha yethu ukuthola uhlelo oluzokwenza lo msebenzi.
Akunandaba noma yiyiphi inguqulo ye-Android onayo kanye ne-terminal lapho uzokwenza khona inqubo, inqubo yokwenza imisebenzi iyefana ncamashiUkuphela kwento eguqukayo isikhombimsebenzisi somsebenzisi esisikhombisa isendlalelo sokwenza ngokwezifiso esisetshenziswe umkhiqizi ngamunye.
Ukuvala zonke izinhlelo zokusebenza ezivulekile kwikhompyutha yethu ndawonye, ​​kufanele chofoza esigcawini, etholakala ohlangothini lwesokunene lwe-bar yokuhambisa ezansi kwesikrini, futhi esingaya nayo esikrinini sasekhaya se-terminal yethu noma sibuyele kuhlelo lokusebenza langaphambilini.
Ngokuchofoza leyo nkinobho, Izinhlelo zokusebenza ezivulekile zizokhonjiswa kumdlalo we-cascade ngalowo mzuzu. Ukuvala zonke izinhlelo zokusebenza ezivulekile, kufanele nje sichofoze ku-X ekhonjiswa ezansi kwazo zonke izinhlelo ezikhonjisiwe zivulekile.
Uma i-terminal yethu inenkinobho yokuqala kuphela futhi ingasiniki ibha yokuzulazula ezansi, ukuze sikwazi ukufinyelela kuzinhlelo zokusebenza ezivulekile, kufanele cindezela inkinobho kabili futhi wenze inqubo efanayo.
Ungaluvala kanjani uhlelo oluthile ku-Android
Uma singafuni ukuvala zonke izinhlelo zokusebenza ezivulekile kwikhompyutha yethu, kodwa kunalokho sifuna ukuvala izinhlelo ezithile kuphelaKumele senze izinyathelo ezifanayo njengasesigabeni esedlule kuze kube yilapho zonke izinhlelo ezivulekile kwikhompyutha yethu zikhonjiswa.
Ngaleso sikhathi, kufanele siye kulolu hlelo lokusebenza okukhulunywa ngalo esifuna ukuvala futhi usilayishe kwesobunxele noma kwesokudla, ukuze ivalwe ngokuzenzekelayo futhi ikhulule inani lememori elidingwa yidivayisi yethu. Ngokuya ngemodeli ye-smartphone noma ithebhulethi esinayo, inani lememori esilikhulule lizokhonjiswa kanye nenkumbulo ephelele yedivayisi yethu nalokho okumahhala ngemuva kokuvala uhlelo.
Singakwazi nokukhetha chofoza ku-X okhonjiswe ngaphezulu ngakwesokudla yazo zonke izinhlelo zokusebenza eziboniswayo uma uchofoza esigcawini sebha yokuzula.
Ungazivimba kanjani izinhlelo zokusebenza ukuthi zisebenze ngemuva
Ngokuya ngemodeli ye-smartphone esinayo, kungenzeka ukuthi ngokuzenzakalela idivayisi yethu layisha izinhlelo zokusebenza ezithile esingazisebenzisi futhi zihlala zitholakala ngemuva zithatha isikhala enkumbulweni yethu. Ngenhlanhla, i-Android isivumela ukuthi siphoqe lezo zinhlelo zokusebenza ukuthi ziyeke ukusebenza futhi zingasebenzisi i-RAM yedivayisi yethu.
Uma sifuna uhlelo lokusebenza luyeke ukusebenza ngemuva, kufanele singene Amasethingi> Izicelo> bese ucindezela kuhlelo sifuna ukuyivimba ukuthi isebenze. Ngaleso sikhathi, sichofoza ku-Force stop, uma singafuni ukuyisusa kudivayisi yethu, noma kuyindlela engcono kakhulu uma sazi ngokuqinisekile ukuthi asisoze sayisebenzisa ku-smartphone yethu.
Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, lolo hlelo lokusebenza luzoyeka ukusebenza futhi sithathe isikhala kokubili kudivayisi yethu nakwimemori yayo. Ngeshwa, uma siqala kabusha idivayisi yethu kungenzeka ukuthi uhlelo lokusebenza luzoqala kabusha ngokuzenzakalela, ngakho-ke kungakuhle ukuthi uphinde wenze le nqubo.
Ngenhlanhla cishe akekho umsebenzisi oqala kabusha i-smartphone yakhe nsuku zonke, futhi lokhu kwenzeka kuphela lapho i-terminal iqala ukukhombisa ukusebenza okuhamba kancane nokungahambi kahle ngoba yize ikhulule inkumbulo yayo, ayikho indlela yokuthi isebenze kahle.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izifundiswa » Ungavala kanjani izinhlelo ezivulekile ku-Android
I-Amazon Echo Spot, sihlaziya isikrini esincane se-Amazon